Kedu mgbe ị ga-eyi okpu ịgba ịnyịnya? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Raingba okirikiri mmiri ozuzo - arụ ọrụ dị irè
Raingba okirikiri mmiri ozuzo - arụ ọrụ dị irè
Kedu mgbe ị ga-eyi okpu ịgba ịnyịnya?
Onye na-agba ịnyịnya ígwèenwere ike eyi n'okpuru okpu agha, mana ọ bụghị mgbe ị na-agba ịnyịnya, n'agbanyeghị agbanye ụkwụ ị chere na ị dị. Nke a ga - eme ka mmadụ nwee nsogbu, ma ọ ga - ebute njakịrị ma ọ bụ iti ihe n'ihu ọha. Naanị oge ọ ga-anabata yaeyikaokpu igwebụ mgbe itinye aka na yaịgba ígwèihe omume na mgbe ejiri yaịgba ígwèkit.Eprel 27 2012
Ọzọkwa, ịgba ịnyịnya ibu adịghị ize ndụ dị ka ndị mmadụ chere na e nwere otu ọnwụ na UK maka ihe dịka 30 nde kilomita nke ịgba ịnyịnya ígwè, nke ahụ bụ ihe dị ka otu narị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-egbu kwa afọ, n'eziokwu ọ na-ekwu 'njem mbụ, mana ọ nwụrụ n'ime N'otu afọ ahụ ihe karịrị mmadụ 85,000 bidoro na ọrịa ndị mepụtara bụ nke ibi ndụ adịghị arụ ọrụ - ọtụtụ ihe dịka ọrịa obi, ọrịa shuga na kansa na ndị a bụ kpọmkwem ọrịa ndị ahụ '. Gba ịnyịnya ígwè nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ na mgbochi. Cgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji lụ ọgụ ịnyịnya ígwè dị ka akụkụ nke okporo ụzọ dịka akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị pụtara na ndị mmadụ na-emega ahụ oge niile. Ọ bụghị ihe ha ga-aga mgbatị ahụ - ha nwere ike ime ya - ọ na-amasị ha ịrụ ọrụ na ya, ịgagharị n'ụlọ ahịa, wdg.
Kedu ihe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eyi na mmiri ozuzo?
Ihe kachasị mkpa maka ịlụ ọgụ makammiri ozuzobụ jaket. Ọbụghị naanịgaezigbo jaket mmiri na-enweghị mmiri mee ka ahụ gị kpoo yagaenyere gị aka ịchịkwa ahụ gị. GoreTex bụ ihe kachasị mma dịka ọ na-enweghị mmiri na iku ume. Ihe na-egbu ume dị ezigbo mkpa ka ị ghara ikpo oke ọkụ.
Enwere nsogbu atọ dị na ịkwọ ụgbọala na ihu igwe mmiri: oyi, chafing, na iguzo ọtọ. Ya mere, lee ndụmọdụ 10 ga-eme ka ị na-anya ụgbọ ala na nkasi obi. Ugbu a ị nwere ike iyi ọtụtụ ọkwa dịka ị chọrọ ichebe onwe gị pụọ na mmiri ozuzo, mana a ga-enwe mgbe niile.
See hụrụ, ọsụsọ ga - - ị nwere ike - ọ nwere ike ọ bụghị ka m si eme, mana ị ga - ekwe ka mmiri gbapụ n’ego ị rụpụtara. Yabụ, ịnwere ike ịkwụsị inwe ahụ iru ala iyi obere uwe na iyi uwe maka ihu igwe mmiri. Yabụ agbanyeghị na mmiri na-ede gị na mpụga, ị ga-enwe obere mmiri n'ime, mana opekata mpe ị kwesịrị ịnweta ikuku ikuku niile ị nwere ike iji mee ka ọ dịkarịa ala ihu igwe gị.
Mgbe ị belata nrụgide taya ahụ, taya na-abịa n'okporo ụzọ ma ị ga-enwekwu njide dị ezigbo mkpa n'okporo ụzọ mmiri n'ihi na enwere obere njide - yabụ ọ dị mkpa iji njide gị dị ka o kwere mee. Dị ka m kwuru ná mmalite, iri nri nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu mgbe ị na-agba ịnyịnya na mmiri mmiri. Ugbu a ọ bụ n'ihi na akpụkpọ ahụ dị mmiri mmiri na-emebi emebi nke ukwuu, mana nke abụọ, mmiri nke igwe kwụ otu ebe na-agbapụta nwere ike ịnwe aja ---- nke dị nwute nwere ike ịba ngwa ngwa n'akụkụ ụfọdụ nwere nsogbu.
Greatzọ kachasị mma iji luso nke a bụ iji ude chamois - ọ bụrụgodi na ịchọghị iji ya n'ọnọdụ nkịtị. Ma eleghị anya, ị ga-azụtara onwe gị obere oge iji nwee ahụ iru ala na ogologo ụbọchị ịnọ na sadulu dị n'ihu gị. A na-ekewa ahịa uwe ụzọ abụọ mgbe ọ na-abịa na mmiri ihu igwe ---- ọdịnala, nke siri ike nke nwere akwa na-enweghị mmiri wee mechie ya, wee nwee akwa ndị nwere ike iku ume, enweghị mmiri, mana n'ozuzu ha dabara adaba ---- nke ahụ pụtara na ọtụtụ ndị ọkachamara na-eji ha eme ihe n'ihi na ha na-anọ ikuku, mana n'eziokwu, ụdị mkpokoro abụọ ahụ na-arụ ọrụ dị iche iche.
N'ihi na ogologo, were dị jụụ ụbọchị na igwe kwụ otu ebe, a hardshell-eme ka ị nkụ ma ya mere ọkụ - ma na mkpumkpu, ike ịnya, a softshell bụ maa mma n'ihi na ọ bụ ihe breathable na ọ dịghị efegharị gburugburu. Greatzọ ọzọ dị mma iji nọrọ na okpomoku n’ụbọchị mmiri bụ ihe dị mfe. Nke ahụ bụ naanị ịgba ịnyịnya ike.
Nke a nwere ike ịbụ aghụghọ ugbu a mgbe ị nwere otu oge akọwapụtara nke ọma, mana enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ dị irè ịme ọrụ ahụ na ịchọrọ ịhapụ okporo ụzọ ndị na-anaghị enye gị ohere ịrụ ọrụ ahụ - - ya mere, m na-echekarị ogologo oge. Yabụ n’ụbọchị mmiri dị, gbalịa ịkwọ ụgbọala n’ọtụtụ ụzọ dị larịị ka ị nwee ike ibute nsogbu ahụ, ị ​​ga-enwetakwa abamuru nke ịnwe brek gị ogologo oge. Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị ọnụ ị nwere ike ịzụta.
Igwe ozu dị umeala n'obi bụkwa otu n'ime ihe kachasị dị irè. Ugbu a enwere ike iji owu mee ya, mana ọ ga - ekpuchi isi gị mgbe mmiri na nche anwụ ga - egbochi ụfọdụ mmiri n'anya gị. Overshoes dị ukwuu.
Ugbu a ha anaghị eme ka ụkwụ gị kpọọ nkụ kpamkpam, mana na njem dị mkpụmkpụ ha na-arụ ezigbo ọrụ - ma ụzọ abụọ siri ike na-eme ka ụkwụ gị dị mma ma na-ekpo ọkụ, mana ọ dịkwa mkpa ịmara na ha bụ ezigbo echiche iyi ha naanị mgbe ọ dị mmiri mmiri, ọbụlagodi na ọ ga-ekpo ọkụ n’èzí. Maka na ị debe akpụkpọ ụkwụ 'nkịta ọhịa' gị dị oke ọnụ n'ọnọdụ dị elu tupu i tinye ndị isi gị na igwe ịsa ahụ. Breeki, ị ga-eche eziokwu ahụ tara akpụ ihu na a ga-emetụta breeki gị n'ụzọ dị egwu - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nwere breeki brekị, ọ ga-ewe gị ogologo oge iji nwayọ nwayọ, ma n'ezie ị ga-emetụta njigide gị na-atụgharị n'ụzọ dị egwu, mana n'ebe ahụ bụ ụzọ iji dozie nke a ruo n'ókè ụfọdụ - na nke ahụ bụ ijide n'aka na ị ga-abịa ebe ahụ tupu oge aga mgbe mmiri na-ada mmiri, ị ga-achọ ịmekwu ntakịrị karịa n'ihi na ihe ikpeazụ ịchọrọ ime bụ breeki n'etiti nkuku maka nkpuchi breeki ka ị na-abawanye ihe ize ndụ nke ịgba ọsọ na mmetụta.
Ya mere, cheta na brek ogologo oge tupu atụgharị mgbe ọ bụ mmiri. Dị ka e kwuru na mbụ, traction dị ezigbo mkpa n'okporo ụzọ mmiri na ụfọdụ ebe dị njọ karịa ndị ọzọ - yabụ nsị na-apụta ìhè n'okporo ụzọ ahụ, ahịrị ọcha dị obere. Ugbu a, na mba ụfọdụ, ahịrị ọcha ndị a na-acha ọcha nwere ike ịdị na-egbu egbu ma na-enye obere ma ọ bụ enweghị njide.
Eleghi anya ọ bụ ụdị agba dị iche ma ọ bụ ihe ọzọ, mana ihe ọ bụla ọ bụ - ọ bụ ezi echiche iji zere ha, ọkachasị mgbe ị na-eme braking, ịghagharị, ma ọ bụ na-agbanye ike na ntị gị dị ka akwa ute mgbe ị na-eme ngwa ngwa mmiri ozuzo nwere ike isi ike karị mgbe ọnọdụ okpomọkụ malitere idebe. uwe mmiri na-enweghị mmiri dị ugbu a, mana na ahụmịhe anyị anaghị arụ ọrụ ọfụma. aka gi dikwa mmiri na oyi.
Ya mere, ihe ndi ozo bu neoprene gloves. Neoprene bụ otu ihe eji eme akwa mmiri. Ọ naghị egbochi mmiri - ọ na-akpọchi oyi akwa na glove n'akụkụ anụ ahụ gị, ebe ọ dị mma ma na-ekpo ọkụ anyị na-aga - ụzọ iri iji mee ka onwe gị dịkwuo mma ma kwụ ọtọ na mmiri ozuzo.
Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma banyere otu ị ga-esi n'akụkụ mmiri ihu igwe, anyị nwere akụkọ gbasara ya. Nwere ike inweta ya site na ịpị Ee, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ndụmọdụ anyị gbasara uwe oyi maka ịgba ígwè, ị nwere ike ịlele ya ebe a n'okpuru. Na ịdenye aha na GCN - pịa soggy m n'ihi na t-n'ezie enweghị m ike ikwenye ihe anyị na-eme. 'Anaghị m eme ya na mmiri ozuzo.
Ugbu a, ọ bụghị m - Achọrọ m ịsị ọnụ m maka ịkwọ ụgbọala siri ike bụ nke kachasị mma ma anyị ka na-eguzo ka-ee- Ka anyị pụọ. Mmiri agbụwo m.
Jaket shei dị nro. Maka ikpo ọkụ,kajaket shei ma ọ bụ jersey bụ nhọrọ ka mma.Naihe ikuku na-egbochi iji chebe ihu,kaezi nhọrọ nke azụ akpa, na mgbe ụfọdụ mmewere nke mmiri ozuzo na-eguzogide,kamma juu shea bụ mgbenke giusoro mbu nke agbachitere megide eziokwuoyina-agba ịnyịnya ọcha. g.
Dị ka onye na-agba ịnyịnya ndụ na onye na-aga n'ihu, enwere m obi mgbawa na ihu igwe ọ bụla enwere ike iche, oge ụfọdụ ruo ọtụtụ awa ma agaghị m agha ụgha, ọ dị mma ma ọ hapụrụ m ahụmịhe nke m nwere ike ịkekọrịta na ndụmọdụ na aghụghọ ole na ole nke gị n'isiokwu taa, ugbu a ị ga-achọpụta na m na-eyi ọtụtụ Assos n'isiokwu a ma ọ bụ n'ihi na ị bụ onye anyị na ya so na-eji ejiji na gzn, mana ndụmọdụ na usoro a niile nwere ike itinye n'ọrụ ụdị uwe ọ bụla. ma ọ bụ ụdị uwe ọ bụla M nwere ike inwe n'ụlọ Homey Rylan Akpa Ihe mbu Aka na ụkwụ gị - ndị a na-ewekarị ihu igwe oyi, yabụ itinye ego n'ụdị akpụkpọ ụkwụ OB dị mma kwesịrị ịbụ akụkụ dị mkpa nke uwe ejiji oyi gị na akpụkpọ ụkwụ gị na ụkwụ gị na ha dịkarịrị nso n'ala, nke ọma, ha ga-ebu oke nke ịgba site n'okporo ụzọ na ifufe oyi ka ha na-agabiga n'igwe A gaghị atụpụ gị site na ịpị ha n'elu oghere na akpụkpọ ụkwụ gị wee ịzụ a mma mma ụzọ overshoes ịgbanwe gị n'oge okpomọkụ akpụkpọ ụkwụ n'ime a ezigbo akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè nke oge oyi ga-eme ka nsọtụ gị na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ ka oge oyi na-aghọ nke gị yoursme nkasi obi na igwe kwụ otu ebe karịa ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịnwale, mana ihe niile ị nwere ike ilekwasị anya bụ aka na ụkwụ gị agaghị egbochi gị na-ekpo ọkụ mgbe ịmalitere na igwe kwụ otu ebe gị na-eche maka nnukwu akwara ahụ dị iche iche na-eche banyere mpaghara niile ikuku na-echekwa ihu apata ụkwụ gị na ọmarịcha gị mgbe ha na-eburu ihe ịgba agba n'okporo ụzọ ubu gị aka gị. oyi akwa n'elu ya ma ọ bụ dịka m na-eyi akwa oyi akwa abụọ ahụ niile ị nwere ike ịnweta na-enweghị oche oche nke ga-enyere aka mee ka akwara ndị a dị ọkụ ozugbo otu n'ime nsogbu ndị a dị en na-eche na oyi bụ ihe niile ọbara oyi ọ ga-amalite na-asọba aka gị na ọ ga-amalite igbochi mmụba ọbara ka ahụ gị na-anwa idebe okpomọkụ site na akụkụ ya, ugbu a enwere ngwa ọrụ dị mkpa ebe a nke ga-eme karịa uwe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịnwe iji kpoo gị ọkụ site jigide na-eme ka isi gị na-ekpo ọkụ na akwa akwa, akwa mkpuchi akwa. Nwere ike ị yikwasị ya uwe akwa oge ọkọchị gị, ikekwe akwa oyi akwa ma ọ bụ karịa, mana ọ ga-emekwu ihe iji mee ka ị kpoo ọkụ n'ime oge oyi karịa ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịzụta. Akụkụ mbụ nke ịzụrụ uwe mwụda ịgba ịnyịnya gị n'oge oyi kwesịrị ịbụ ezigbo akwa uwe m kwuru na m ga-achọ mkpuchi okpukpu abụọ karịa mkpuchi ikuku ndị a na-abịa na akwa abụọ nke nnukwu ihe eji eme ihe na Roubaix, mana enwekwara ego ọzọ na nke ahụ bụ pantyhose na-enweghị ịzụrụ mpempe akwụkwọ oche.
Ugbu a ị ka ga-asacha ndị a oge niile dịka ị ga-asa pad tights, mana n'ihi na ha nwere akwa abụọ karịa gị buttocks gị size ọ ga-eme ka ị na a bit ọkụ maka abụọ nke anọ UK oge, ị ga-abụ na pụọ ​​na dị nnọọ yi nkedo, gaa n'okpuru okpu agha gị, mana ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ r elyplummets ị chọghị ka isi gị kpoo ọkụ ma ntị gị kpuchie n'ihi na ọ bụ ebe dị mma ịhapụ ọtụtụ ọkụ na okpu agha na-agbasakwa gburugburu isi anyị ụbọchị ndị a ka ọ dị mma ma eleghị anya, ọ bụ ebe dị mma iji yikwasị arama na-amalite site na omenala ndị a nwere obere ihe ma ọ bụrụ na ịnọ ebe dị jụụ, ọ bụ ezie na ị na-eyi okpu eji ajị anụ dabara adaba, nke a bụ ụzọ dị irè ma dịkwa ọnụ ala iji mee ka isi gị dị jụụ dị ka ha bụ ihe dị ọnụ ala n'agbanyeghị na ọ bụghị oyi otú ahụ taa m na-eyi naanị otu Igwe na-ekpo ọkụ, ọ bụ naanị oyi ebe, ezigbo onye nchekwa olu ga-enyere gị aka ijide n'ọtụtụ ọkụ ebe enwere ọbara na-aga nso elu ebe ahụ, nke ga-egbu ị ugbu a ma ọ bụrụ na ị bi na Canada ma ọ bụ Russia, ị kwesịrị ị nwere ike ịnọ na Tụlee iyi balaclava kwesịrị ekwesị n'ihi na anyị maara na unu ụmụ nwoke na-achọ ịnya ezigbo oyi na uwe ndị na-agba ịnyịnya bụ ihe dị ịtụnanya ekwuru na ee, ọ dị mma, enwere m, mana ha dị otu a ezi, Echere m n'ezie na ha bara uru ịkọwa ugboro abụọ ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ogologo draịvụ ike mana ị ka chọrọ ịkwụsị ọkara na cafe ahụ, ọ bụrụ na ọsụsọ dị ka m ga-eme, ị ga-abịarute ụlọ kafe a nwere akwa mgbochi mmiri na nke ahu g'acha gi oyi okpukpu mara nma. Yabụ ọ bụrụ na iburu onye nnọchi gị n'akpa gị ma gbanye ya tupu ị nọdụ ala ịnụ ụtọ kọfị gị nke abụọ ma ọ bụ nke atọ dịka m dị ugbu a, ị ga-ezerekwa ịhapụ ndị ọzọ nọ na otu ahụ n'ihi na ha, mgbe ha dere mmiri na ọsụsọ, nwere omume nke isi, ebe ọ bụ na anyị ka nọ na kọfị obere ọ dị mma na ọkụ ị nwere ike ịwụnye ya n'akpa azụ gị ma ọ bụrụ na enwere ọnọdụ mberede mgbe ihu igwe na-akawanye njọ m ga-ewere mmiri mgbe niile karịa ikuku naanị n'ihi na ha bara uru karịa na ọ bụ oge oyi ma ka anyị ghara ileghara eziokwu ahụ m bi na UK anya, ọ nwere ike ịbụ na mmiri ozuzo adịghị anya ugbu a, ọbụlagodi na ị maara na ikekwe ị gaghị achọ akwa ọzọ. n'ihi na ihu igwe ga-anọ otu ụzọ ọ dị taa, iwere nke ka bara uru n'ihi na chee na ọ dị gra gra ise na mpụga ma ị nwere taya taya ma ọ bụ na ị ga-atụba ya na mgbakwunye ma ọ ga-eme ihe niile dị iche ma ọ bụ nke mbụ nkeji ole na ole whe n ị na-ahapụ kafe ahụ mgbe ahụ mgbe ị nọ na njem otu na mgbakwunye ọzọ ọ bụrụgodi naanị ebumnuche bụ ibinye ya onye ọzọ ma gbanwee ụbọchị mmadụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị hụrụ ngbanwe ọzọ mberede ahụ, ị ​​nwere ike ọ dị mma ijide n'aka na ọ mara mma ma na-enwu gbaa ma na-ewu ewu ma ọ bụrụ na ị dị ntakịrị karịa ka ebum n'uche ma ọ bụ ọ bụrụ na kaadị ahụ na mberede gbapụta na ọ ga-adị ntakịrị ọchịchịrị Azụ a na-amasị m nke ukwuu, bụ oroma na nkume a na-ebipụta com na a isiokwu banyere uwe , ị nwere ike karịa ihe ijuanya ịnụ ka m na-ekwu maka mmega ahụ, mana enwere ụfọdụ ihu igwe nke ị na-enweghị ike ịpụ n'èzí na ee e, anyị anaghị ekwu okwu ü Banyere gị Ndị Canada si ebe ahụ anyị maara na ị bụ ike na anyị na-agba ịnyịnya n'agbanyeghị ihe ihu igwe dị ọbụlagodi na ọ bụ mwepu 40 ị bụ naanị agbụrụ dị iche m na-ekwu maka oge oyi nke Britain ebe m na-amaghị mwepu 2 na 2 Degree na ọ bụ moraine nke na - enweghị ike ịnagide ụgbọala na mpụga na ụgbọala dị otú ahụ ihu igwe, n'ihi ya, kama nke ahụ na-akwọ ụgbọala na ebe a na-ere kọfị, ị ga-eme ka ọ dị mkpụmkpụ karịa, ọ ga-abụrịrị na ị ga-agbali elekere na ọkara iji wee nwee ike ịnụ ọkụ, ị ga-enwe mgbatị ahụ dị mma, ị ga-anọkwa obere oge tupu ị drinkụọ mmanya na ezigbo mmiri ọkụ, ugbu a na-akwụsị oyi, nke na-ada ụda na-adịghị eche echiche ma ị nwere ike iche na ị ga-abụ hypothermic maka oge ole na ole mbụ mana ọ dị mma ime ka ị nwekwuo ahụ iru ala maka ezumike nke njem ahụ ma ọ bụrụ na ị mee nke a Ahụ chọrọ oge iji bilie na-arụ ọrụ okpomọkụ mgbe ị yi uwe mara mma na ihe ndị yiri ya ị na-ekpo ọkụ n'ime nkeji iri mbụ nke abụọ ị ga-esi n'ọnụ ụzọ pụta, ka ọnọdụ okpomọkụ gị na-ebili site na arụ ọrụ, ị ga-adọka igwe kwụ otu ebe gị niile. a na-ekpo ọkụ, ọsụsọ ọgbaghara nke ga-eme gị oyi mgbe oge gachara mgbe ịnya ịnya na-enweta mgbe ị gbadara otu n'ime isi, yabụ kama ime nke ahụ ịchọrọ ịchụpụ ma nwee obere ntakịrị oge ole na ole ọ dị ntakịrị oyi, kpoo ahụ gị ọkụ site na ike nke njem ahụ wee w ọrịa maka ndị ọzọ nwere ntụsara ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọghị oyi n'oge ole na ole mbụ, ịnwere ike iwepụ aka ma wepụ mgbe minit ise ruo iri gafee, na-eji ejiji maka ụdị njem ị ga-eme na ụdị nke ị Ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya siri ike ị nwere ike iyi obere uwe pere mpe ma ọ na - enyere aka ikuku ikuku ịgbagharị, ị gaghị enwe oke mmiri mgbe ị na - apụ n'okporo ụzọ, n'agbanyeghị na ị nwere ike iyi obere obere Uwe, nke ahụ bụ n'ihi na ikuku dị ntakịrị na ị ga-arụ ọrụ, ọ na-esiri ya ike ịbịaru nso ọsọ ị na-agbadata n'okporo ụzọ.
Emere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọzụzụ m niile n'okporo ụzọ mgbe ihu igwe dị njọ n'ihi na amaara m na ị ga-azụ ihe dịka nke a siri ike ma dịkwa ọkụ karị, ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye ya otu aka ma ọ bụ mkpịsị aka ukwu ma ọ bụ dịka ihe ọ bụla masịrị gị kpọọ ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike icheta ihe anyị Agbaghara, dobe ya na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a ma m ga-ahapụ gị ka ị laa, ị nọ na-agba ụmụ ejima m
Okpu ịgba ịnyịnya ịgba ọ dị jụụ?
Onye na-agba ịnyịnya ígwèmee ka ọsụsọ na mmiri zoo n’anya gị. Ha na-echebekwa gị pụọ na ọnọdụ anwụ dị elu nke oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ maka ịghara ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ.Onye na-agba ịnyịnya ígwèha abụọ tinye isi n’ọkụdị jụụihu igwe site na ijide okpomọkụ nadị jụụna ihu igwe na-ekpo ọkụ site na ịpị mmiri na iku ume.Mar 25 2017
Ndi uru ha na-eyi okpu ịgba ígwè?
Ndị na-agba ịnyịnya na-ejikarị podiumsyibaseballokpuha na ndị nkwado ha na ya kamaokpu igwe. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ndị na-anwale ma chekwaa ọdịnala ma debe yayiha. Kasị ọkachamara podiums agawo n'ụzọ nke baseballokpu. Otú ọ dị, ụfọdụ na-anwa ichekwa ọdịnala na ọdịdị ahụ.June 12. 2016 g.
Gịnị mere ndị na-agba igwe ji eyi okpu okpokoro isi?
Okpukpo isi okpuihe dị mkpa maka ụmụ nwoke nwere ntutu dị mkpụmkpụ ma ọ bụ isi nkwọcha ndị na-achọ ịgba ọsọ, ọsụsọ, igwe kwụ otu ebe na igwu egwu mgbe ha na-ejide isi oyi na akọrọ. Ha dabara adaba na nke gịokpokoro isinadịemere site na ihe di iche ichedịemee ka iku ume, fechaa na ibu ọma n'oge ogologo awa nkeeyi.
Cycgba ịnyịnya ígwè na mmiri ozuzo ọ dị ize ndụ?
Na-agba ịnyịnya nammiri ozuzoka kariridị ize ndụkarịa ịnya na ọnọdụ akọrọ maka ihe doro anya: na-amị amị mgbe mmiri dị. Okporo ụzọ n'onwe ya. Ihe a na-ese agba na ihe mgbochi okporo ụzọ dị ka ice. Ọ na - ewe ogologo oge iji kwụsị ma ọ dị mfe ịpụ apụ, yabụ ịkwesịrị ịkwụsị breeki na mbụ, ọkachasị na mmiri mmiri.01.09.2020
Ọ dị mma igwe kwụ otu ebe zoro ezo?
Yabụ,mmiri ozuzoabụghị nsogbu buru ibu ma ọ bụrụhaala na ị na-enye ya oge zuru ezu iji kpoo kpamkpam. Nchegbu ka ukwuu nke ị kwesịrịnweebụ ma ị ga-nwetammiri mgbe ị na-anọdụ ala maka ịnyịnya mgbemmiri ozuzo. Zọ a na-ewu ewu iji mee ka mmiri pụọ na sadulu gị bụ iji ụdị mkpuchi plastik nke dị mfe ihichapụ ma ọ bụ wepu.
Ikwesiri iyi balaclava n'okpuru okpu agha?
Ga-eyikabalaclava n'okpurunke giokpu ọgba tum tum. .B.mkpọtụbụ akwa akwa dabara nke na-ekpuchi isi na olu gị dum, akụkụ ụfọdụ nke ihu (dịka anya gị na / ma ọ bụ imi na ọnụ gị) ekpuchighị.
Gini mere iji choo akwa mmiri ozuzo n’elu igwe?
A na-ekepụta okpu mmiri ozuzo iji mee ka ogwe aka gị na aka gị kọọ mgbe ị ruru maka aka ahụ. Otu uwe nke ga - echebe ozu gị niile ka mmiri zoo. E jiri ya tụnyere ọtụtụ ihe mmiri ozuzo, okpu mmiri ozuzo na-enye ohere ikuku ikuku ka ị ghara inwe ọsụsọ. Ala okpu na-emeghe ka ikuku wee fee. Mfe itinye ma gbanyụọ.
Kedu ihe okpu ịnyịnya ígwè nwere ike imere Gị?
Ogwe igwe ịgba ịnyịnya kachasị mma nwere ike ịme ọtụtụ ihe: ha nwere ike ichebe gị site na anyanwụ wee kwụsị ọsụsọ na mmiri ozuzo ịba n'anya gị. I nwekwara ike iji ha mee nkwupụta, ma nke ahụ bụ 'Ahụrụ m Rapha n'anya' ma ọ bụ 'M hụrụ Lug the Dog n'anya'.
Kedu ụzọ kachasị mma isi eyi akwa mkpuchi mmiri?
Gba mmiri ozuzo na-agba ịnyịnya ígwè dị mma maka ịtụba n'elu jersey, mana ị gaghị edebe ụkwụ gị (ma ọ bụ akpa azụ). Nke a bụ ebe okpu mmiri ozuzo na-abanye. Mgbe ị nụrụ mkpụrụ okwu mmiri ozuzo ma ọ bụ poncho, ị nwere ike ịse foto mkpuchi ndị ahụ dị ọnụ ala ị ga-esi na njem mmiri na Disneyland.